Baiboly pejy 26 - Ny Baiboly
Voalohany < 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Manaraka Farany
56Nony nanenika ny tany rehetra ny mosary, novohan'i Josefa ny tranom-bary rehetra naorina tany, ary nivarotra tamin'ny Ejipsiana izy; ary nitombo nitombo ihany ny mosary tamin'ny tany Ejipta. 57Tonga tao Ejipta avokoa ny avy amin'ny tany rehetra, hividy vary amin'i Josefa, fa nihamafy ny mosary tamin'ny tany rehetra.
35Dia samy nandraraka ny tao anaty lasakany izy ireo, ka indro ny fonosam-bolany samy teo anaty lasakany avy. Nahita ny fonosam-bolany izy sy ny rainy, ka samy raiki-tahotra. 36Hoy Jakoba rainy taminy: Foananareo anaka aho, fa Josefa tsy eto intsony, Simeona koa tsy eto, Benjamina indray halainareo; ary izaho ihany no itambesaran'izany rehetra izany. 37Dia hoy Robena tamin-drainy: Vonoy ny zanako roalahy, raha tsy tafaveriko aty aminao Benjamina fa atolory eto an-tànako izy, dia izaho no hitondra azy hody aty aminao indray. 38Fa hoy izy: Tsy hiara-midina aminareo ny zanako. Ny rahalahiny efa maty, izy irery no sisa. Ka raha hidiran-doza any amin'ilay làlan-kalehanareo any izy, dia hampidininareo any amin'ny fonenan'ny maty, amin'alahelo, ny voloko fotsy.
1Nihamafy ny mosary tamin'ny tany; 2ka nony efa tapitra nohaniny ny vary nalain'izy ireo tany Ejipta, dia hoy rainy taminy: Mandehàna indray mividy hanina kely ho antsika. 3Ka hoy Jodà namaly azy: Efa nilaza mazava taminay ralehilahy, nanao hoe: Tsy hahita ny tavako hianareo raha tsy miaraka aminareo ilay rahalahinareo. 4Ka raha avelanao hiaraka aminay ny rahalahinay, dia hidina izahay hividy hanina ho anao. 5Fa raha tsy avelanao handeha izy, tsy hidina izahay, satria ralehilahy efa nilaza taminay hoe: Tsy hahita ny tavako hianareo, raha tsy miaraka aminareo ilay rahalahinareo. 6Nahoana hianareo, hoy Israely, no dia nampiditra angano tamiko, nilaza tamin-dralehilahy hoe: Mbola manan-drahalahy? 7Dia hoy iretsy: Maro ny zavatra nadinin-dralehilahy taminay, momba ny tenanay sy ny fianakavianay, fa hoy izy: Mbola velona va ny rainareo? Mbola manan-drahalahy hafa koa va hianareo? Ka araka izay nanontaniany no namalianay azy. Ary ahoana no nahazoanay an-tsaina izay hanaovany hoe: Ento midina ny rahalahinareo. 8Ary Jodà nilaza tamin'Israely rainy hoe: Avelao handeha ny zaza hiaraka amiko, hiainganay sy handehanany, mba samy ho velona isika fa tsy ho faty na izahay sy hianao, na ny zanatsika madinika. 9Izaho no hiantoka azy; eo an-tànako no hitakianao azy. Raha tsy tafaveriko aty aminao izy, ka tsy tongako eto anatrehanao, dia ho meloka aminao, amin'ny andro rehetra hiainako aho. 10Fa raha tsy nijanonjanona izahay dia efa tafaverina fanindroany toy izay.
Pejy: Voalohany < 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Manaraka Farany
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0055 seconds